JINGHPAW KASA: ပန်ဝါဒေသ တွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိ၊ စစ်အစိုးရမှ စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်
ပန်ဝါဒေသ တွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိ၊ စစ်အစိုးရမှ စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၁) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ပန်ဝါ ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရ စစ်ယာဉ်တန်းကို ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၃) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ မိုင်းဗုံးများဖြင့် ဒီဇင်ဘာ (၉) ရက်နေ့တွင် ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ မိုင်းဗုံးများဖြင့် တိုက်ခိုက်ရာ ဗမာအစိုးရ စစ်သား (၄၄) ဦးခန့် သေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ (၁၀) ရက်နေ့ မနက်မှစ၍ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၃) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ ကချင်ပြည် နှင့် တရုတ်ပြည် နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၅နှင့်၆) အနီးတစ်ဝိုက်တွင် တိုက်ပွဲများပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဤသို့ တိုက်ခိုက်ရာ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ ဗမာစစ်အစိုးရစစ်တပ်များ နေရာယူထားသော နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၅ နှင့် ၆) အနီးတစ်ဝိုက်မှ တောင်နှစ်လုံးကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်နိုိင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက်ပြီး ဗမာအစိုးရစစ်တပ်၏ အရေးကြီး စစ်စခန်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်မှ တပ်စခန်းများ လက်လွှတ်လိုက်ရပြီး၊ စစ်သားများ ကျဆုံးမှု များပြားလာသောကြောင့် ယနေ့မနက်တွင် စစ်ရဟတ်ယာဉ် (၂) စီးဖြင့် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များကို ဟေဟင်မှ မြေပြင်ပစ် ဒုံးလက်နက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်း ဆက်လက် သတင်းရရှိပါသည်။ ယခု သတင်းရေးသား နေချိန်အထိ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(44) Burmese soldiers were injured and died on the road to Pang Wa, which is under KIA (1st) Brigade area on 9th December according to KIA front-line officer report. KIA (33) battalion patriotic soldiers exploded with mines that the Burmese military convoy to Pang Wa as offensive operation. Moreover, the several battle was continuously fighting KIA (33) battalion and Burmese troops in Kachin and China boarder post no.5and6on 10th December. And KIA patriotic soldiers seized two mountains near the border post no.5and6and again rose up firing to get more important Burmese posts. Because of many Burmese soldiers died and lost the front-line posts, they used military helicopter and fired with an air missile to KIA. The severe battle was continuing in that area.
mjzaulat mjzaulat said...
N bungli hpe mung shakrip kau ya yang mai na wa
Lung wa ai yawng hpe sat kau ya mi. Nbung li yawng hpe mung gap kau ya rit.Myu tsaw hpyen hpung ni awng dang na hpe kam ai.
n bungli hpe tim htem htem di kau ya mu. dai nbung li gawt ai ni shagri she brep hkra gap kau ya mu.
N bungli phe gat na nga yang,amai phe sha gat ya u, stabiliser hten mat yang, dai nbungli phe gara khu ma n mai hkang mat sai rai yang nbungli khrat kapaw mat na ra. God's with us.
we should take video when they are firing with helicopter ......
... at the front-line ....the solider should have camera .....then they can take the video which is Burma Army is using .air force for attack not for medical use.... because it is important to take video than to shoot it down .....
if we have the video which is Burma Army is using .air force for attack not for medical use....we can tell the world and international communities to do something for that...... if they can't don anything....... we have permission to shoot all the motherfucking planes and helicopters which is flying in our sky.....
i know it that no one can permit us to shoot down the military helicopter but at that time when we got the video...... we shoot it down... no one can say any-word to blame us
I agreed with above comment.Acording to this action, Burma goverment represented KACHIN is an independent country.So KIA also can use IGLA rocket missile.(please check it out IGLA rocket missile in youtube)
သူ များ ပန် ဝါ ဒေ သ သွားထိုး တာ ကျ တော့ မ ပြော တော့ ဘူး ပေါ့။
ပဲ ပင် ပေါက် တန်းစီ နေ တယ်းးးးးးးးးးးးဘ သ